Myanmar and India to boost collaboration in trade | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar and India to boost collaboration in trade
U Than Myint, Union Minister of the Ministry of Commerce, said during the Seventh Joint Committee Meeting, that Myanmar will boost collaboration with India in trade and other sectors for mutual interest.
He expressed his confidence at the meeting saying that it will boost bilateral collaboration in trade, investment, agriculture, textile, transportation, and banking and belief that the economic pressures caused by the COVID-19 pandemic can be overcome through close cooperation.
At the meeting, Mr. Piyush Goyal, Minister of the Ministry of Commerce and Industry, India, said that India will continue collaboration with Myanmar for improving trades through border gates and sea routes and India Trade Promotion Organization (ITPO) will closely work with MYANTRADE.
India has made investments in various sectors and pledged to provide assistance in infrastructure development as well as technical assistance for sustainable development.
India is Myanmar’s fourth-largest trading partner after Thailand, China, and Singapore, and the second-largest export market after Thailand as it imports 25 percent of Myanmar’s total export.
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံကြား အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေး နှင့်အခြားကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဟုစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သန်းမြင့် ကပြောသည်။
သတ္တမအကြိမ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးက ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ-အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးပူးတွဲ ကော်မတီအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခြင်းအား ဖြင့်နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အထည်အလိပ်၊ ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပိုမိုတိုးတက် လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော Covid-19 ကမ္ဘာ့ကပ် ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး တွင် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းများကြုံတွေ့လျက်ရှိရာ နှစ်နိုင်ငံ အကြား ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ မှတစ်ဆင့် အခက်အခဲများကို အတူလက်တွဲ၍ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ဒေါက်တာသန်းမြင့်ကပြောသည်။
ယခုအစည်းအဝေး၏ ရလဒ်များသည် နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်သွားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များကို ရှာဖွေရန်အတွက် ခိုင်မာသော အုတ်မြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်းနှင့် မိမိတို့အနေဖြင့် အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေရန်အတွက် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အခြား ကဏ္ဍများတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် နီးကပ်စွာ အပြု သဘောဆောင်၍ ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် နှစ်နိုင်ငံပင်လယ် ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေရေးအတွက် MYANTRADE နှင့် India Trade Promotion Organization(ITPO)တို့အကြား နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး H.E. Mr. Piyush Goyal ကပြောသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အဦ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လမ်း/တံတားစီမံကိန်း များကို ဆက် လက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းကောင်း ပီသစွာဖြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီ အ ထောက်အပံ့များကိုလည်း ဆက်လက် ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တွင်သာမက အခြားကဏ္ဍ များတွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းအားဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုများ တိုးတက် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရကည်။
Previous articleJapan to Participate in Dawei SEZ
Next articleMyanmar’s dream to receive5million tourists blown away by COVID-19